mardi, 21 janvier 2020 22:05
Birao kaominina 1400 amin'ny 1600 manerana ny nosy no tokony nihavao
- Fanajariana na fanamboarana ny trano birao fiasana: 100 000 000 ar
- Ordinateur + imprimante= 3 000 000ar
- Panneau solaire = 2 000 000 ar
- Meuble - chaise, bureau, armoire = 10 000 000ar
- Fanajariana ny manodidina, voninkazo, zaridaina, goudron parking = 10 000 000ar
- Fanavaozana ny sekoly = 50 000 000Ar
- Fampandehanan-draharaha sy karama kaominina = 25 000 000Ar (Raha 12 000 000 ariary amin'izao ny subvention commune, raha ho azo)
mardi, 21 janvier 2020 21:59
Fitsarana: Tazomina am-ponja vonjimaika ao Miarinarivo ilay Zandary nitifitra olona tao Dondona
Natolotra ny fampanoavana ao amin’ny Fitsarana ambaratonga voalohany Miarinarivo androany talata 21 janoary 2020 ilay Zandary, nitifitra ka nahafaty olona telo sy nandratra olona telo hafa tao Dondona, Distrikan’i Soavinandriana Itasy tamin’ny 7 janoary 2020.
Fanerena olona hanome vola sy vono niniana natao no vesatra nanenjehana azy. Notazomina amponja vonjimaika ao amin’ny fonjan’i Miarinarivo ilay Zandary taorian’izay.
mardi, 21 janvier 2020 21:57
Fifamoivoizana: Ho tapaka ny lalana Antanandrano mihazo an'Androhibe
Mampilaza ny Ben'ny Tanàna Ankadikely Ilafy fa noho ny fanamboarana, dia ho tapaka ny lalana eo Antanandrano mihazo an'Androhibe ny alarobia 22 janoary manomboka amin'ny 6ora maraina ka hatramin'ny alakamisy 23 janoary 2020 amin'ny 6ora hariva.
mardi, 21 janvier 2020 21:34
Anahidrano-Antsohihy: Mpangalatr’omby maty niharan’ny fitsaram-bahoaka
Omby iray no nisy naka an-tsokosoko tao Befanivana Kaominina Anahidrano, Distrika Antsohihy ny harivan’ny alatsinainy 20 janoary 2020, tokony ho tamin’ny 5 ora sy sasany. Nanao fanarahan-dia avy hatrany ny Fokonolona, sady nampandre ny brigadin’ny Zandary Anahidrano.
Nifankatratra ny mpanaradia sy ilay mpangalatra mbola teny ampandroahana ny omby. Nanohitra ilay jiolahy sady nanao tari-dositra raha hisambotra azy ny mpanaradia ka teo no raikitra ny sakoroka.
Tsy lasa lavitra anefa izy dia voasambotra. Niharan’ny daroka ary dia namoy ny ainy noho ny hamafin’ny fahavoazana nanjo azy. Tonga nanamarika ny zava-nisy ny Zandary sy ny dokoterana avy amin’ny CSB Anahidrano. Taorian’izay dia nanokatra fanadihadiana ny Zandary ao amin’ny brigady Anahidrano.
mardi, 21 janvier 2020 16:47
Mahajanga: Manomboka miakatra ny rano
Noho ny ora-mikija eto an-drenivohitry ny Faritra Boeny dia dibo-drano ireo faritra iva, ary efa manomboka miakatra ny rano amin'ny Fokontany sasany.
mardi, 21 janvier 2020 16:44
Ambatondrazaka: Vehivavy bevohoka efa ho teraka niharan’ny fanolanana
Miseho lany indray tato ho ato ny herisetra ara-nofo mianjady amin’ny vehivavy. Tato anatin’ny iray volana teo izao dia 12 ny tranga fanolanana niseho.
Ny alin’ny alahady hifoha ny alatsinainy, dia vehivavy iray mitondra vohoka, izay efa tsy ho ela dia ho teraka no niharan’ny fanolanana tao an-tranony, teo imasom-badiny. Telo ireo jiolahy tafiditra tao an-trano tamin’io.
Morondava: Camaron 30kg sy makamba 50kg tratra saika hamidy
Saron’ny mpiasa mpanara-maso ny jono eto Morondava, teny amin’ny toby fiantsonan’ny fiarakodia eo Morondava Centre, androany atoandro teo ny camaron 30kg sy makamba 50kg efa tsy misy lohany raha nokasaina ho entina ao Antananarivo.
Araka ny fanazavan-dRandrenjarivelo Tsiriniaina, lehiben’ny sampandraharaham-paritry ny jono eto Menabe dia mbola anatin’ny fotoana tsy azo anjonoana, fitaterana ary fivarotana ireo hazandranomasina ireo izao fa voarara, ka nogiazana avy hatrany.
Hatolotra ny Sekolin’ny Marenina eto Morondava (SEMAMO) sy ny « Varavarana Tsara Endrika » mpitaiza sembana ireo entana nogiazana ireo, araka ny fanazavany hatrany.
mardi, 21 janvier 2020 14:20
Manakambahiny Andrefana: Mpijery baolina nilatsahan’ny varatra, roa namoy ny ainy
Namono olona tao amin’ny Kaominina Manakambahiny Andrefana, Distrika Ambatondrazaka ny varatra. Mpijery baolina tao amin’ny kianjan’Anjirobaka no nilatsahany ny alahady 19 janoary 2020 teo. Efa-dahy no voa, roa namoy ny ainy, ny roa hafa mbola manaraka fitsaboana.
mardi, 21 janvier 2020 13:59
Morondava: Mirongatra ny vaky trano
Namory ireo lehiben’ny Fokontany eto amin’ny Kaominina ambonivohitr’i Morondava, sy ireo avy ao amin’ny Kaominina Bemanonga, samy ato amin’ny Faritra Menabe ny talem-paritry ny filaminam-bahoaka Menabe manoloana ny firongatry ny vaky trano tato ho ato, ka hiaraha-mikatsaka vahaolana sy handrindrana ny asa handaminana izany.
Miroso ny fandravana ireo fotodrafitrasa hasiam-panavaozana etsy Mahamasina, hanorenana Kianja Barea. Ny fandravana ireo « tribunes latérales » roa no nisantarana azy, taorian’ny famefena ny faritra tsy ho azon’ny besinimaro ifemezivezena.
Raha ny tetiandro dia haharitra 18 volana ka hizara roa ny fizotry ny asa. Hisantarana ny azy ny « tribunes » izay harodana ary havaozina tanteraka ka hovitaina mialoha ny 26 jona 2020.
Hitohy hatramin’ny volana jona 2021 ny asa. Hahazaka mpijery 40 880 ny kianja rehefa vita, ka 15 536 ny toerana eny amin’ny « tribunes », hiampy toerana vaovao miisa 9 704 ny eny amin’ny « gradins », ankoatra ireo 15 640 amin’izao fotoana izao.